Taariikhda My Butros » 3 Sababaha ma aha in aad aad u baabi On Date A First
Sano lamaane A ka hor, saaxiib ii siiyey magaca iyo taleefan lambarka ah oo sheegay in saaxiibkeed waxaa ii filaya in ay soo wac oo weydii baxay. Waxaan u maleeyay play dibadeed noqon lahaa taariikh xiiso ugu horeysay. Waxaan qaadan lahaa geeduhu, dhalo khamri ah, buste iyo wada raaxaysan habeen xagaaga qurux badan. Waxaan ahaa xaq ku saabsan oo dhan in.
Taariikhda Tani indha la dhacay inay ku beeganto ila eey yar fadhiya la jeclaysto ah 10 todobaadkii jir ah sarkaal Golden. Waxaan u maleeyay in this ku dari lahaa oo kaliya in ay taariikhda sidaas oo kale ayaan isaga hortiinna u keenay weheliyaan. Halkii, aan saaxiib yar xiiso halaagsameen isagoo jeedinaaya. Halkan jira saddex sababood oo aan qaadashada eey yar ee taariikhda a horeysay:
1. Eygan ayaa dareen badan soo jiidanaya taas oo kala gooyey aan wada hadalkeena urursatay
Waxaan marnaba awoodin in ay si dhab ah u galaan kasta oo kale oo. muqisho, ama xayawaanka ee guud, waa weyn haasaawe bilaabayaashan, laakiin in macnaheedu yahay in qof kasta uu rabay inuu weydiiso sida jir ayuu ahaa.
2.Maxaa yeelay, waxaan lahaa baabi oo aan eey ka weyn, wuxuu u baahan yahay fiiro joogto ah
Taasi waxay keentay in aan ahaayeen haya in ka badan oo eey ka badan laba qof oo taariikhda ah la saaxiibin saddexaad weheliyaan tagging.
3.Saxarada eey yar aan marayno shahwo
Haddii aad leedahay ey ka weyn, biririf kaadida dhici doona inta ugu yar oo aad qabto gacanta ku yar ka badan goorta iyo meesha dhacaan.
Dhamaadkii habeenkii, Anigu ma aan runtii ma dareemayaa sida inaan wax badan oo fursad si aad u hesho in la ogaado taariikhda aan lahaa. Laga soo waday eyga (tan iyo markii uu u bislaan in ay weli socdaan on xadhig ah) in nadaafadda isaga ka dib in la wadaago sida jirka uu la boqolaal shisheeyayaal xiiso ahaa, Waxaan dareemayay inaan la shaqeeyo habeenkii oo dhan halkii ay hesho in la ogaado gabadha yar oo fiican. Ma jirin taariikhda labaad, laakiin waxaan baratay cashir lama ilaawaan. Leave eey yar ee guriga taariikhda ugu horeysay.